"Waa Kuma Xiddiga Ugu Fiican Abid Kubadda Cagta Caalamku?" - Jose Mourinho Oo Iska Diiday Ronaldo Iyo Messi & Halyeeyga Uu Doortay - Gool24.Net
“Waa Kuma Xiddiga Ugu Fiican Abid Kubadda Cagta Caalamku?” – Jose Mourinho Oo Iska Diiday Ronaldo Iyo Messi & Halyeeyga Uu Doortay
Tababaraha kooxda Tottenham ee Jose Mourinho ayaa ka leexday xiddigaha jiilkan ugu wanaagsan ee Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi mar uu ka hadlay xiddiga ugu wanaagsan ee abid kubadda cagta soo maray.
Mourinho ayaa jagadaas u doortay Ronaldo Nazario oo uu kula soo shaqeeyay xilli ciyaareed uu Barelona tababare ku xigeen ka ahaa oo uu kula soo guuleystay koobabka kala ah Copa Del Rey, Cup Winners’ Cup iyo Super Coppa de Spana.
Ronaldo Nazario ayaa kaliya 19 sano jir ahaa markii uu Barcelona kaga soo biiray dhinaca kooxda PSV isagoo 47 gool kusoo dhaliyay 49 kulan oo uu Barca xilli ciyaareedkaas u ciyaaray isla markaana kusoo guuleystay Ballon d’Or.
Mourinho oo u warramayay LiveScore isla markaana uu soo xigtay Corriere dello Sport ayaa sheegay in Ronaldo Nazario uu ahaa xiddigii ugu fiicnaa ee uu abid ku arkay garoon.
Special One oo sharaxaad bixinaya ayaa sheegay in waayaha ciyaareed ee R9 ay sidaas ka qurxoonaan lahaayeen balse ay dhaawacyo dishoodeen.
“Ciyaaryahankii ugu fiicnaa ee aan abid garoon ku arko (Ronaldo Nazario)” ayuu ugu horreynba yidhi tababare Jose Mourinho.
“Waxaan filayaa inay dhaawacyo dileen waayo ciyaareed oo noqon lahaa mid xataa sidaas ka cajiibsan, laakiin tayadaas uu ninkaasi lahaa isaga oo 19 sano jir ah waxa ay ahayd wax cajiib ah”
Ronaldo Nazario ayaa ahaa mid dhaawacyada jilibka ah deris lasoo ahaa, waxa uu heshiis rekoodhka aduunka ah ugu soo wareegay Inter Milan balse xilli ciyaareedkiisii saddexaad ee kooxdaas ayuu gaadhay dhaawac xun oo jilibka ah oo uu saddex sano garoomada kaga maqnaa.
Nazario ayaa kasoo laabtay dhaawacaas oo koobkii aduunka ee 2002 ku hoggaamiyay Brazil isla markaana u wareegay Real Madrid oo uu Ballon d’Or markii labaad ku qaaday.